Austzọ Jane Austen gabigara afọ abụọ nke ọnwụ ya | Akụkọ Njem
Austzọ Jane Austen gabigara afọ abụọ nke ọnwụ ya
Afọ a nke 2017 na-egosi ncheta afọ 200 nke ọnwụ Jane Austen, otu n'ime ndị edemede Britain kachasị arụsị n'ụwa niile bụ onye amaara n'oge ndụ ya dịka "nwanyị na-ede."
N'ụbọchị nke bicentennial dị n'akụkụ dị iche iche nke mba ahụ, ha kwadebere iji sọpụrụ onye edemede ahụ site na ngosi, nzukọ, ụzọ ndị njem na ihe ndị ọzọ metụtara ya na ọrụ ya.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado akwụkwọ akụkọ Jane Austen, sonyere anyị n'okporo ụzọ a site na obodo na obodo ebe onye edemede ahụ bi.
Foto | Nleta Hampshire
Nke a bụ obodo nke Jane Austen na ebe o biri ruo mgbe ọ gbara afọ 25. N'ebe a, o biri ndu udo nke dika nke nwanyi nke ime ala ime ime ime obodo: agụmakwụkwọ bụ isi, ihe nkiri n'èzí, ịga leta ndị ikwu na ndị enyi na oge ohere iji tinye n'ọrụ ndị ọzọ dịka ịkwa akwa ma ọ bụ ide ihe, ihe Jane Austen chere na ọ bụ adịghị ike site na nwata.
Na Steventon ọ malitere ide akwụkwọ akụkọ dịka Lady Susan, Northanger Abbey, Sense na Sensibility, ma ọ bụ Mpako na ajọ mbunobi. Akwukwo edemede nke juputara na nlebara anya banyere uwa gbara ya gburugburu na onodu ndi nwanyi noge ya, ebe ha na enwe ego nke ha ma hapuru onye ikwu ha di nwayọ ma obu agbamakwụkwọ bara uru nke ga enyere ha aka idi ndu.
Oflọ nke ezinụlọ Austen furu efu ogologo oge gara aga na obere obodo a, mana ịgagharị n'okporo ámá ya, anyị nwere ike iche n'echiche ụwa ha na ọha ndị Georgia ga-adị n'oge ahụ.
Mgbe nna ya lara ezumike nká na 1805, ezinụlọ ahụ lara ezumike nká na Bath. Otu ebe onye edemede ahụ enweghị mmasị na mbụ n'ihi na ọ bụ obodo ama ama maka spa ya mana nke ọ mụtara ịhụ n'anya n'ime afọ ise ọ nọrọ ebe ahụ.
Ije ije n'okporo ụzọ Bath dị ka inwe mmetụta nke otu n'ime akwụkwọ akụkọ Jane. Unesco World Heritage City, ugbu a na e nwere thematic njegharị mara n'ụzọ zuru ezu, ndụ ya na-arụ ọrụ a ebe.
Ekwesịrị ịkọwa aha Jane Austen Center dị na 40 Gay Street, ụlọ ewubere maka ememme eluigwe na ala nke nwanyị edemede dere. N'ime oge nleta a, anyị ga-enwe ike ilele vidio mmeghe na ụfọdụ iberibe ihe nkiri nke akwụkwọ akụkọ ya na-akọwa etu ndụ dị n'oge ahụ na ihe mmekọrịta Jane na Bath.
N'oge nleta ahụ, ndị ọrụ afọ ofufo na-eje ozi dị ka ndị nduzi ma gosi anyị nchịkọta ụlọ nke oge ahụ, uwe ndị sitere na ụfọdụ mmegharị telivishọn na-aga nke ọma nke ọrụ ha, ọbụnakwa ọnụ ọgụgụ wax na mmekorita ya na Madame Tussaud iji mata ihe Jane Austen ga-abụ dị ka ndụ n'ezie. Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, na etiti a, anyị nwekwara ike ịchọta otu n'ime akwụkwọ 10-paụnd nwere ozi nzuzo na ụtụ maka onye edemede.
Nleta na Jane Austen Center enweghị ike ịkwụsị na-agaghị eleta ụlọ ahịa onyinye, ebe ị nwere ike ịzụta ihe ncheta nke onye edemede kachasị amasị gị.
N’okporo ámá ebe Jane Austen Centre dị, e nwekwara ụlọ Austen ebe ha biri nwa oge. Otú ọ dị, ịda ogbenye nke nna ya ji nwayọọ nwayọọ mee ka ọ kwaga ebe ndị dị ala karị.
N'agbanyeghị na ọ hụghị Bat n'anya, na obodo a, o tinyere ọtụtụ amaokwu site na akwụkwọ akụkọ ya dịka Northanger Abbey na Persuasion. Yabụ nke a bụ otu n'ime ebe kachasị mma iji kpoo mmụọ ọrụ Austen.
Mgbe ọ nọrọ afọ atọ na Southampton mgbe nna ya nwụsịrị, Jane Austen kwagara Chawton, n'otu obere ụlọ nke nwanne ya nwoke bara ọgaranya Edward nyere ya, ya na nne ya, nwanne ya nwanyị Cassandra na enyi ya.
Ka ọ dị ugbu a, enwere ike ileta ụlọ ahụ. Dị mfe n'ọdịdị, ọ na-ejigide ugwu na ịdị mma nke oge Regency. Ọ na-egosiputa arịa ụlọ, akwụkwọ ozi na ihe ndị dịịrị onye dere ya na ọbụna tebụl ebe Jane na-anọdụ ala ide ihe na ebe ọ kpụrụ ọtụtụ akwụkwọ akụkọ ya dịka Mansfield Park ma ọ bụ Persuasion, na ndị ọzọ.
Onye edemede akwukwo a ga-aga obodo a n’ime oge ikpe-azu ya iji gbakee n’oria nke ya onwe ya mara na ya agaghi agbake. N'oge na-adịghị anya mgbe ọ gafesịrị ebe ahụ, Jane nwụrụ ma lie ya na Katidral Winchester mara mma, nnukwu ụlọ ndị Gothic.
Nleta nke katidral na-efu ihe dị ka £ 6,50 mana maka mgbakwunye £ 3 ọ ga-ekwe omume ịnweta ụlọ elu ahụ site na ebe ị nwere echiche dị egwu nke obodo ahụ.
Na-esote ili Jane Austen, e nwere mbadamba nkume ndị edobere maka nsọpụrụ ya na ngosipụta banyere ndụ ya na onye ọbịa ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Austzọ Jane Austen gabigara afọ abụọ nke ọnwụ ya
Yslọ ihe nkiri Thyssen na-eme ememme 25th nke Ọktọba ya